Madaxweyne Trump Oo Qalinka Ku Duugay Cunaqabateyn Cusub Oo Uu Ku Soo Rogay Iran - Hoyga Wararka
Home Somali News	Madaxweyne Trump Oo Qalinka Ku Duugay Cunaqabateyn Cusub Oo Uu Ku Soo Rogay Iran
Madaxweyne Trump Oo Qalinka Ku Duugay Cunaqabateyn Cusub Oo Uu Ku Soo Rogay Iran
written by muscab xasan June 25, 2019
Madaxweyne Trump ayaa qalinka ku duugay cuanqabateyn cusub uu ku soo rogay dalka Iran, cunaqabateynka oo saameyn u geysanaya hoggaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei.
Mr Trump wuxuu sheegay inuu cunaqabateynkan cusub uu yahay mid jawaab looga dhigayo diyaraddi aan duuliyaha lahayn uu Mareykanku lahaa ee ay Iran soo ridday iyo falal kale oo ay ku dhaqaaqday.
Ayatollah Ali Khamenei, oo ah hoggaamiyaha ruuxiga ee ugu sarreeya Iran “ayaa ka masuul ah dabeecadaha qallifan uu caadeystay maamulka Tehran” ayuu yiri Mr Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif wuxuu sheegay “Mareykanka inuu quursaday Diblumaasiyadda.”
Mareykanka marka uu cunaqabateynka cusub ku dhawaaqay kaddib wuxuu wasiirka arrimaha dibadda Iiran Mr Zarif boggiisa Tweetarka uu ku qoray wuxuu Mareykanka ku eedeeyey inuu yahay “dal dagaal u heellan”.
Xiisadda u dhaxeysa labada dal ayaa cirka isku sii shareereysay toddobaadyadii ugu dambeeyey.
Wasiirka Maaliyadda Mareykanka Steve Munchin wuxuu sheegay Mr Trump inuu bixiyey amar culus oo lagu xayirayo balaayiin doolar oo uu dalka iiraan leeyahay, tallabbada Mareykanka uu qaaday oo ka dambeysay diyaaraddi aan duuliyaha lahayn uu Mareykanku lahaa oo ay Iran soo ridday.
Cunaqabateynkan cusub yuu saameynayaa?
Wasaaaradda maaliyadda Mareykanka waxay sheegtay in cunaqabateynkan cusub uu saameyn doono 8 sargaal oo ugu sarreysa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan
Cunaqabateynkan cusub wuxuu sida oo kale sameynayaa “dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee mas’uuliyiinta ku shaqeysa awaamiirta ka soo baxdo golaha sare uu hoggaamiyo hoggaamiyaha Ruuxiga Ayatollah Ali Khamenei oo ay talada dalka Iran gacanta ugu jirto.
Mareykanka wuxuu Khamenei uu ku eedeeyey inuu hanti badan uu maamulo isla-markaana uu ku maalgeliyo ciidamada ilaalada kacaanka iran.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo wuxuu 2018-kii uu hantida Khamenei u ku qayaasay iney gaareyso $95 bilyan oo doolar, lacagtaasi oo ciidamada Iran waxbadan uu ugu qabto.
Mr Munchin waxaa kale oo uu sheegay in Mr Zarif cunaqabateyn lagu soo rogi doono dabayaaqada toddobaadkan.
Cunaqabateynadi hore sideey Iran u saameeyeen?
Cunaqabateynadi hore ee Iran horay loo saaray waxay ku saleeysnaayeen dhinacyada tamarta, maraakiibta iyo maaliyadda taasoo saameysay maalgashiga dalka Iran iyo Saliidda ay dhoofin jirtay.
Waxaa sida oo kale shirkadaha laga leeyahay dalka Mareykanka ay cunaqabateynadi hore ka mamnuuceen iney xiriir ganacsi la sameeystaan dalka Iran iyo dal ama shirkad kasta oo dalkaasii xiriir la leh.
Alaabada ay dibadaha kala soo degi jirtay Iran cunaqabateynadu wey saameyaan waxaana aad u yaraaday gashiga warshadaha ee dibadaha ka imanayey.
Iran oo cunaqabateynadaasi ka jawaabeysana waxay sheegtay iney qaadeyso tallaabbooyin dhowr ah oo ay ku jabineyso ballaantii ay ku gashay heshiiskii Niyuukilarka.
Bayaan ka soo baxay 5-ta dal ee kala ah Rushka, UK, Jarmalka, Shiinaha iyo Fransiiska ayaa waxay ku sheegeen iney Iran dhankeeda u hoggaansantay heshiika lala galay.
Ka bixitaan Mareykanka ee heshiiska niyukleerka Iran Bishii May ayaa muran ka dhex aabuuray Mareykanka iyo wadamada xulufada la ah ka dib markii dalalka Midowga Yurub ay shegeen in ay ka go’an tahay in ay qayb ka sii ahaadaan heshiiska niyukleerka ee Iran.
Diyaaraddi aan duuliyaha lahayn uu Mareykanku lahaa maxaa ku dhacay?
Ciidmada ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen diyaaradda aan duuliyaha lahayn uu Mareykanka leeyahay oo ay soo rideen ay tahay farrin cad oo loo diraya Mareykanka laguna ogeysiinayo inuu soo tallaabay khadka cas oo lama taabtaanka ah.
Balse ciidamada Mareykanka waxay sheegeen iney diyaaraddooda ay ku duuleysay hawada caalamiga ah waxay ayna xilligaasi dul mareysy Marinka caalamiga ee Hormuz.
Amir Ali Hajizadeh oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada Iran wuxuu sheegay iney diyaarad militari oo kale oo sidda 35 qof ay mareysay meel u dhaw diyaaradda ay soo rideen “wan awoodnay inaan soo ridno balse ma sameyn” ayuu yiri,.
Ka bixitaan Mareykanka ee heshiiska niyukleerka Iiraan Bishii May ayaa muran ka dhex aabuuray Mareykanka iyo wadamada xulufada la ah ka dib markii dalalka Midowga Yurub ay shegeen in ay ka go,an tahay in ay qayb ka sii ahaadaan heshiiska niyukleerka ee Iiraan.
Ka dib ka bixitaankii heshiiska ee Mareykanka ayaa waxaa si tartartiib ah ay Mareykanka dib ugu soo celiyeen cunaqabatayntii horey looga qaaday Iiraan.
Wareegii kowaad ee cunaqabataynada Iiiraan billaabmay bishii August, iyada oo ay xigeen laba wareeg oo kale oo la dhaqangaliyay bishii November.
Mareykanka ayaa sidoo kale ka hor waqtigii kama dambeysta ahaa ee heshiiskane ee 4 November waxa ay maamulka madaxwayne Trump isku dayeen in wadamada ay saaxibada yihiin ay ku cadaadiyaan in ay Iiraan u jaraan dhammaan heshiiska ganacsiga ,waxa ayna Marykanka shirkadaha Yurub ugu hanjabayeen cunaqabatayn.
Qaabka ay arrintan Mareykanka u wajaheen ayaa waxaa sidoo kale cambaareeyay wadamaad faransiiska ,Jarmalka iyo Britain.
Madaxweyne Trump oo heshiiskaasi ku tilmaamay mid musiibo ah ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskaasi dhanka Niyuklerka ee Iran uusan Iran ka hor istaageyn inay yeelato hub Niyukler, waxaana uu intaa raaciyay in heshiiskaasi uu yahay mid hal dhinac u xaglinaya oo xitaa haddii Iran ay u hogaansato heshiiskaasi uusan wax nabad ah soo kordhin doonin.
Ganacsiga online-ka ee Soomaaliya
Yuusuf Garaad iyo Thabit Cabdi oo Baaq kasoo...
Askari ka Tirsanaa Ciidamada Jubbaland Oo Lagu Fuliyey...
Alshabaab oo Weerar Ku Dilay 12-Askari oo ka...
Daawo: Xamar Waa La Wada Lee Yahey Inta...
Maxaa looga hadlaya Kulanka Golaha Shacabka Maanta?
Mooshinka iyo Dhaliisha Labada ku Xigeen Midkeebaa Sax...
Wadooyinka Magaalada Muqdisho Oo Xidhan Maanta
Dil Loo Geystey Hogaamiyihii Hore Ciidanka
C/raxmaan Cabdi Shakuur Warsame “Waxaan Villa uga digayaa...